Mashandisiro Ekushandisa Tuma Tangi Kumaneja ema group Mentions muMicrosoft Teams
Matimu eMicrosoft anotendera iwe kuisa vashandisi kuitira kuti iwe ugone kutaura kana kutaura neboka rese revanhu panguva imwe chete pasina kunyora mazita emunhu wese. Heano maitiro ekuisa mabhigi eboka uye kuwedzera sevazhinji vashandi pamwe navo pazvinenge zvichidikanwa.
Kutaurisa vanhu ne "@" zvakajairika mune zvakawanda zveappa mazuva ano, kungave kuri Slack, Discord, Microsoft Office, kana zvimwe zvimwe zvirongwa. Matomu haana mutsauko kune izvi, asi ikozvino unogona zvakare kugadzira "tag mapoka" ayo anokuregedza iwe kuwedzera vashandisi uye wobva ataura iro boka kuti rizivise munhu wese arimo pasina kana kududza zita rimwe nerimwe.
Ita Wese Anga Anogadzira Tag Mapoka
Nekutadza, muridzi wechikwata chete ndiye anogona kugadzira tag boka, asi chero mutezo weboka anogona kuwedzera mushandisi ku tag boka. Kana iwe uchida kuti nhengo dzechikwata chako dzigone kugadzira mamaki mapoka, tinya matatu-dot menyu icon parutivi rweZita rezita uye tinya mabhatani e "Manage Team".
Tevere, sarudza "Zvirongwa" uye shandura "Ndiani Anogona Kuwedzera ma tag" sarudzo kubva ku "Varidzi Chete" kuenda ku "Nhengo Dzese."
Gadzira Tag Mapoka
Kuti ugadzire iyo nyowani tag boka, tinya matatu-dot menyu icon padyo neTimu zita uye wozo "Tonga ma tag."
Kubva ipapo, sarudza "Gadzira Tag."
Ipa tag yako zita, wedzera nhengo dzechikwata, uye tinya pasi "Gadzira" bhatani.
Mashandisiro Ekushandisa Tapi Boka
Boka remaki rinogona kushandiswa munzira mbiri: unogona kudoma boka muchiteshi sezvakangoita chero mumwe mushandisi, kana unogona kutanga kutaurirana neboka rinozongobatanidza munhu wese akateyiwa muboka iro.
Kuti utaure boka muchiteshi, nyora "@" uyezve zita reboka. Iri boka regedhi rinoratidzika mune remangwana sezvakangoita zita remushandisi.
Kana iwe ukataura boka, munhu wese muboka iro anogamuchira chiziviso.
Kutanga kutaura neboka, tinya bhatani re “New Chat” wotanga kunyora zita reboka. Iri boka regedhi rinoratidzika mune remangwana sezvakangoita zita remushandisi.
Nhengo dzese dzeboka rinogamuchira chiziviso cheiyo hurukuro nyoro sekunge ivo vataurwa nemazita.
Chii chinonzi Microsoft Teams? Iyo Slack-yakafanana app yeHofisi 365 yakatsanangurwa
Mashandisiro Aungaita Heading Tags Kuti Uwane More Search Engine Traffic
Patsurudza mafaera ako uye maforodha uchishandisa tag yakatarwa sisitimu neKutara Ye Windows
Chii chinonzi Slack uye chinoshanda sei? Uyezve akawanda eSlack matipi uye manomano
Nyowani TV yekutenderera Sensation - KODI